Home Wararka Ciyaaraha Manchester United oo ku dhow inay dhameystirto heshiis 75 milyan ginni ah...
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay qarka u saarantahay heshiis £ 75m oo ku aadan Xidiga Borussia Dortmund ee Sancho .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaa sannado badan lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Old Trafford, madaama Red Devils ay diiday inay la kulanto Dortmund lacag dhan 108 milyan oo ginni xagaagii hore.
Sida laga soo xigtay The Mirror , United ayaa kalsooni weyn ku qabta inay xaqiijiso saxiixa Sancho ka hor xilli ciyaareedka 2021-22, iyadoo Red Devils ay rajeyneyso inay heshiis 75 milyan oo ginni ah la gaarto Dortmund.
Qaab dhismeedka lacag bixinta ee ay doorbidayso United ayaa lagu soo waramayaa inay sii wadayso wadaxaajoodka, waxaana warbixinta ay haatan sheegeysaa in Dortmund ay dooneyso inay hesho inta badan lacagta afka hore ka hor inta aysan jeebka ku shubin waxyaabo dheeri ah oo la xiriira qaab ciyaareedkooda.
Dortmund ayaa rajeyneysa inay dhameystirto heshiiska ka hor dhamaadka bisha July, Edinson Cavani ayaa la sheegay inuu doonayo inuu u dhiibo lambarkiisa 7aad ee Sancho hadii uu yimaado.
Previous articleBarcelona oo booska Jordi Alba ka dhigeyso xidig hore uga tegay oo kasoo baxay Lamasia.
Next articleReal Madrid oo keentay Qorshe Arsenal ku heli karto Xidiga Martin Odegaard